वाह् ! आईपीएलमा सन्दीपको सुपर प्रदर्शन - Suvham News
वाह् ! आईपीएलमा सन्दीपको सुपर प्रदर्शन
६ जेठ, काठमाडौं । ‘उत्कृष्ट खोज, वाह् ! क्या खेलाडी’ इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा अन्तिम खेलमा जित हात पारेपछि दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दीप लामिछानेको तस्वीर ट्वीट गर्दै लेखेको छ ।
त्यसैले होला सन्दीपले ११ खेल बेञ्चमा विताए । तर, जब दिल्ली प्ले अफमा पुग्ने सम्भावना टर्‍यो,सन्दीपको भाग्य खुल्यो । दिल्लीको बाँकी तीन वटै खेलमा सन्दीपले खेल्ने मौका पाए ।
आफूले पाएको मौकामा खरो उत्रिएका उनले प्रतियोगिताका अन्तिम खेलमा तीनसहित ५ विकेट लिए ।
विश्वकै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानविरुद्ध बलिङ गर्नु र विश्वास जितेर पहिलो ओभरमै आउनु सानो कुरा नभएको उनी बताउँछन् । ‘सुरुमा एउटा नेपालीले राम्रो प्लेटर्फम पायो त्यो राम्रो हो भन्ने थियो । अहिले उसको खेलले झनै राम्रो अवस्था देखाएको छ’ उनले भने, ‘उसले ‘न्याचुरल’ खेल देखायो । खेल्न पायो भने विकेट लिन्छ भन्ने विश्वास थियो ।’
यसले सन्दीपलाई भविष्यका लागि थप चुनौती थपेको प्रशिक्षक टमाटा बताउँछन् । ‘त्यो स्तरमा खेल देखाएपछि उसमा अझ राम्रो गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । नेपाली टिममा पनि अझ राम्रो गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
सन्दीपले आईपीएलमा गरेको १२ ओभरमा ८२ रन खर्चिएर ५ विकेट लिएका हुन् । उनको इकोनोमी ६.८३ र एभरेज १६.४० रहृयो ।
२० लाख भारतीय रुपैयाँमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दीपलाई टिममा आबद्ध गर्दा जुन अपेक्षा गरेको थिएन, आफू त्यो अपेक्षालायक भएको उनले देखाए ।
Prevनेपालगन्जमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सम्भावना बढ्यो
Nextमैदान बाहिर बसेरै प्लेअफमा राजस्थान, बाहिरियो पञ्जाव